के तेलको मूल्य अझै बढ्ला ? - NepalWatch
के तेलको मूल्य अझै बढ्ला ?
Previous News २०७९ असार १२ गते १४:४०
नेपालवाच २०७९ असार ९ गते १४:४०
काठमाडौं । यतिवेला विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । युक्रेन युद्ध सुरु भएयता निरन्तर वृद्धि हुन थालेको कच्चा तेलको मूल्य युद्धअघिका दिनहरुको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन, तेलकाे मूल्यमा अस्थिरता कायमै छ ।
ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ग्लोबल बेन्चमार्कमा जुनकाे पहिलाे साता प्रति ब्यारेल १२४ डलर ब्यारेल पुग्यो, यो मार्चको सुरुदेखि यता सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । युरोपियन युनियनले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्नो रुसी तेल आयात ९० प्रतिशत घटाउने घोषणा गरेपछि झन् तेलको मूल्यमा यस्तो प्रभाव देखिएको हो ।
मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदरमा तीव्र वृद्धिका कारण हुने सम्भावित मन्दीबाट वस्तुकाे माग प्रभावित हुने चिन्ता बढ्दै गएपछि जुनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तेलको मूल्य बुधबार पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । तर केन्द्रीय बैंकहरू उधारो लागत बढाउन बाध्य भएका छन् किनभने ऊर्जा लागतमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई १९८० को दशकदेखि यता नदेखिएको स्तरमा पुर्याएको छ । यसका कारण विश्वभरका अर्थतन्त्रहरू मन्दीतर्फ गइरहेको छ ।
युरोपेली संघले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांश इयू देशहरुसँग अब रुसी कच्चा तेलको आयात बन्द गर्न करिब ६ महिना र अन्य सबै तेल उत्पादनहरुको लागि आठ महिना छ ।
कोरोनाभाइरसका कारण चीनका ठूला सहरहरु सांघाई, बेइजिङ र अन्य क्षेत्रमा पनि लकडाउन भएकाले चीनमा तेलको माग घटेको थियो । विश्वमा धेरै तेल आयात गर्ने देशमा अब लकडाउन खुलेसँगै माग बढ्न थालेपछि अझै तेलको मूल्य बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चीनले रुसबाट तेलको आयात बढाउन सक्छ, जसको बेन्चमार्क युराल्स क्रुड (कच्चा) ग्रेड बेन्टमा प्रति ब्यारेल ३४ डलरको छुटमा व्यापार गरिरहेको छ ।
भोर्टेक्साको अनुमानअनुसार चीनले मे महिनामा प्रतिदिन ११.१ मिलियन ब्यारेल रुसी तेल आयात गरेको छ । जुन गत वर्षको औसतमा ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
चीनका कारण इन्धनको मूल्य अहिले भइरहेको भन्दा अझ बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
के अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ला ?